Tropical Wood - Orinasa misahana manokana ny asa vita amin'ny hazo
Misahana ny asa vita amin'ny hazo
Ny momba ny orinasa
Tropical Wood dia atrikasa misahana ny fandrafetana hazo, gorodina, ohatra, varavarana manara-penitra. Raha toa ka maha liana anao dia afaka miantso ny laharana :
Niorina tamin’ny taona 1994, Tropical Wood dia niompana manokana amin’ny fanamboarana fanaka vita amin’ny hazo sy sary sikotra nanomboka ny taona 2017. Ny orinasa dia manana velarana toeram-piasana mirefy 4.400 tora-droa ary mpiasa maherin’ny 180. Ny mpiasa tsirairay izay samy manana ny andraikitrany samy hafa mba anatanterahana ny fikasanao ary anomezana fahafam-po ny mpanjifany.
Ny orinasa Tropical Wood dia manana milina matihanina amin’ny hiaka farany izay mifandray amin’ny solontsaina mba azahoana kalitao avo lenta sy anomezana fahafam-po ho an’ny mpanjifany.
Ireo traikefa anananay
Ireo sehatra rehetra ireo dia singa tsy afa misaraka amin’ny fanatanterahana ny asa mba ho lavorary araka ny tokony ho izy. Izany dia ao anaty ny fomba fiasa avo lenta sy ny lamina napetrakan’ny orinasa Tropical Wood. Mamorona sy mampifanaraka ny tolotra amin’ny fomba fijerin’ny mpanjifa.
Birao misahana ny foto-drafitr'asa
Miainga amin’ny fanamarihanao, ny birao misahana ny foto-drafitr’asa Tropical Wood dia mamaritra ny fepetra momba ny tekikasanao ara-tekinika, mifandraika amin’ireo fitaovana sy akora ilaina, tsy adino koa ny fitsipika mifandraika amin’ izany. Ireo tekinisianina dia vonona anome fahafaham-po anao amin’ireo dingana mikasika an’izany.
Ny hazo dia fitaovana sy kojakoja ao an-tokantrano tsy azo idifina noho ny tombontsoa ara-tekinika sy ny hatsarany entiny.
Nivotra ny fitaovana ho enti-miasa amin’izany raha ampitahana amin’ny taloha noho ny tekinolojia vaovao sy ny solosaina afaka miasa miaraka aminy.
Ny fitiavana manokana ny asa momba ny hazo, no mahatonga ireo mpanao sary sikotra ato amin’ny Tropical Wood itondra ny tsara indrindra, sy andrafitra ireo hazo sarobidy amin’ny fomba moderina fena hatsarana. Eo koa ny fitsonjovana ny fanondranana ny hazo.
Ny Tropical Wood dia afaka manampy anao amin’ny fanatanaterahana sy fanatsarana ny sehatra iainanao. Ny tekinika sy ny fahaiza-manao ananany ary koa ny fanajana ny fenitra azo antoka dia tombony iray lehibe.
Ny fanatanterahana ny asa dia tombony sy antoka iray izay manangona hetsika sy sehatra maromaro.
Email (Tsy maintsy fenoina)
Afatra (sy maintsy fenoina)
© 2019 Tropical Wood All rights reserved